[अटो पार्ट्स निर्माता] फ्रन्ट लाइटहरू कसरी छनौट गर्ने?
गाडी लाइटहरूले गाडीहरूमा बत्तीहरू बुझाउँछन्। ती सवारी साधनहरूका लागि रातमा सडक उज्यालो पार्न उपकरणका साथै विभिन्न सवारी चालक स prom्केतहरू प्रेरित गर्नका लागि उपकरण हो। गाडी लाइटहरू सामान्यतया हेडलाइटहरू, टेललाइटहरू, मोड स sign्केतहरू, आदि मा विभाजित हुन्छन्। हेडलैम्पको कुन शैली आज मुख्यतया साझा गरिन्छ?
अटो पार्ट्स लैम्पहरू Head हेडलाइटहरूको वर्गीकरण
कार हेडलाइटहरू – हलोजन हेडलाइटहरू
हलोजन बत्तीहरू वास्तवमा एक विशेष किसिमको बत्ती हो। सिद्धान्त यो हो कि जब हाल रेसिस्टरको माध्यमबाट प्रवाह हुन्छ, यसले तातो उत्पन्न गर्दछ, र जब तापक्रम पर्याप्त हुन्छ, यसले कालो शरीरको विकिरणलाई दृश्य लाइट ब्यान्डमा एक तरंगदैर्ध्यको साथ उत्सर्जित गर्दछ। सामान्यतया दुई प्रकारका हलोजन बत्ती हुन्छन्: आयोडिन टंगस्टन बत्तीहरू र ब्रोमिन टंगस्टन बत्ती। सिद्धान्त उही हो। जब ताप्नलाइट बत्ती प्रज्वलित हुन्छ, यद्यपि फिलामेन्ट तापमान पग्लने बिन्दु र टung्गस्टनको उमाल्ने बिन्दु भन्दा बढी हुँदैन, टुंगस्टनको थोरै मात्रा अझै पनि उच्च तापमानमा अस्थिर हुन्छ। जब अस्थिर टन्ग्स्टन परमाणुहरूले कूलर बल्ब शेलको सामना गर्दछन्, तिनीहरू घाँस पर्ने र झर्ने छन्, र समयसँगै कालो टंगस्टन फिल्म बल्ब शेलमा जम्मा हुनेछ। यसै कारण साधारण भ्वाँसे बत्तीहरूको बाहिरी खोल लामो समय पछि कालो हुन्छ। यदि तपाईं बल्बलाई केही आयोडीनले भर्नुहुन्छ, जब बल्ब प्रज्वलित हुन्छ, आयोडीन एक ग्यासमा अस्थिर हुन्छ। जब आयोडिन बाफले चिसो टंगस्टन भेट्छ, यसले कम उमाल्ने पोइन्ट-टung्गस्टन आयोडाइडको साथ एक कम्पाउन्ड बनाउँदछ, जसले बल्बको खोललाई टर्पेस्टेन वाष्पशील बनाउँछ। टंगस्टन आयोडाइड ग्यास विघटन हुन्छ जब उच्च तापमानमा पर्दछ। जब टung्गस्टन आयोडाइड ग्यासले फिलामेन्ट भेट्छ, यो सडेर जान्छ र टुंगस्टनलाई तन्तुमा छोडिन्छ, जबकि आयोडिनले ग्यासको रूपमा फाइलेमेन्ट र शेलको बिचमा निरन्तर चल्छ। जब यो पुनः बल्ब शेलमा आउँदछ, यसले फेरि शेललाई सम्पर्क गर्दछ। टung्गस्टन प्रतिक्रिया ... यस तर्फ, एकतर्फी, फाइलेन्ट ट t्गस्टनलाई बल्बको खोलमा अस्थिर बनाइराख्छ, र अर्को तर्फ, आयोडिनले टung्गस्टनलाई फिनाले फिर्ता लैजान्छ, ताकि फिलामेन्टको दर र खपतको दर। धेरै कम गरिएको छ, र बल्बको आयु लामो छ। तसर्थ, आयोडिन टंगस्टन बत्तीहरू उच्च शक्तिको साथ तापक्रमित बत्तीहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। हलोजन बत्तीहरू मोटर वाहन बत्तीको क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग भईरहेको छ।
कार हेडलाइटहरू - क्सीनन बत्तीहरू
Xenon lamp HID उच्च तीव्रता डिस्चार्ज उच्च प्रेशर ग्यास डिस्चार्ज बत्तीको संक्षेप हो, जसलाई भारी धातु बत्ती वा क्सीनन बत्ती भन्न सकिन्छ। यसको सिद्धान्त यूवी-कट एन्टि-अल्ट्राभायोलेट क्रिस्टल क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूबलाई विभिन्न रासायनिक ग्याँसहरूसहित भर्नु हो, जसमध्ये अधिकांश ज्यात ग्याँसहरू जस्तै क्सीनन (क्सेनन) र आयोडाइड हुन्, र त्यसपछि गिट्टीलाई कारमा सर्छ। १२-भोल्टको डीसी भोल्टेज तत्काल २ 23,००० वोल्टको वर्तमानमा प्रेशर गरिन्छ, र क्वार्ट्ज ट्यूबमा जेनोन इलेक्ट्रोन उच्च-भोल्टेज आयामको माध्यमबाट अलग गर्न उत्साहित हुन्छन्, र दुई इलेक्ट्रोडहरूको बीचमा एक प्रकाश स्रोत उत्पन्न हुन्छ। यो तथाकथित ग्यास डिस्चार्ज हो। क्सीनन ग्यासले उत्पादन गरेको सेतो सुपर-मजबूत चाप प्रकाशले बत्तीको रंग तापमान बढाउन सक्छ, उज्यालोमा सूर्यको किरणहरू जस्तै, एचआईडी अपरेशनको लागि वर्तमान आवश्यक 3.5.A ए मात्र छ, परम्परागत हेलोजन बल्बको भन्दा तीन गुणा बढी चमक छ, र सेवा जीवन परम्परागत भन्दा लामो छ हलोजन बल्ब १० गुणा लामो छ। क्सीनन बत्तीहरू मोटर वाहन बत्तीको क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग गरिएको छ।
कार हेडलाइटहरू og कुहाक बत्तीहरू
यो हेडलाइट भन्दा अलि कम कारको अगाडि स्थापित छ, र वर्षा र कुहिरो मौसममा सवारी चलाउँदा सडक उज्यालो पार्न प्रयोग गरियो। कोहरेमा कम दृश्यताका कारण ड्राइभरको दृश्य प्रतिबन्धित छ। प्रकाशले चालु दूरी बढाउन सक्छ, विशेष गरी पहेलो एन्टी-फग बत्तीले कडा प्रकाश प्रवेश गर्छ, यसले ड्राइभर र वरपरका ट्राफिक सहभागीहरूको दृश्यता सुधार गर्न सक्दछ, ताकि आउने कार र पैदल यात्रीहरूले एक अर्कालाई लामो दूरीमा भेट्टाउन सक्दछन्।
यदि कुहिरो बत्ती अचानक अचानक बाहिर जान्छ भने तपाईंले हेर्नु पर्छ कि यो सम्बन्धित भागको न्यून सम्पर्कको कारणले भएको हो। यदि नियन्त्रण मोड्युल प्लग क्षतिग्रस्त छ, पानी र अन्य भर्चुअल जडान कारकहरू, यो उखुला सडक स्थितिको माथिको घटनाको कारण बन्छ।
कार हेडलाइटहरू – एलईडी बत्तीहरू
लाइट उत्सर्जक डायोड, संक्षिप्त एलईडी, चिनियाँ नाम लाईट-उत्सर्जक डायोड हो। एलईडी लाइट स्ट्रिपले एक स्ट्रिप आकारको एफपीसी (फ्लेक्सिभ सर्किट बोर्ड) वा पीसीबी कठोर बोर्डमा एलईडीको असेंबलीलाई जनाउँछ, जुन यसको उत्पाद आकारको रूपमा पट्टी जस्तै हो।
कार हेडलाइटहरू – दिनको समयमा चलिरहेको बत्तीहरू
दिनको चालु बत्तीहरू गाडी ईन्जिन सुरु भएपछि स्वचालित रूपमा चालू गर्नुपर्नेछ। अँध्यारो पछि, ड्राइभरले म्यानुअल रूपमा परम्परागत बत्तीहरू खोल्नु पर्छ, र दिउँसो चलिरहेको बत्तीहरू स्वचालित रूपमा बन्द हुनेछ। डेटाइम चलिरहेको बत्तीहरूले अन्य "सडक प्रयोगकर्ताहरू" लाई कार देख्न सजिलो बनाउँदछ, र हालको कम बीम हेडलाइटहरू भन्दा कम उर्जा खपत गर्दछ। डेटाइम चालु बत्तीहरू केवल केही राम्रो कारहरूमा सुसज्जित छन् र राम्रो कारहरूको प्रतीक बन्छन्।
कारको बडीको अगाडि स्थापना गरिएको कारको नेतृत्वमा चलिरहेको बत्तीहरू बत्तीहरू हुन् जुन दिनको सवारीमा गाडी सजिलै पहिचान गर्न सक्दछन्। यसको कार्य ड्राइभरलाई सडक स्पष्ट रूपमा हेर्नको लागि सक्षम गर्न होईन, तर अरूलाई पनि कार आउँदैछ भनेर भन्ना दिन। त्यसकारण, यस प्रकारको बत्ती जलाउने बत्ती होइन, तर संकेत बत्ती हो। निस्सन्देह, कार डेटाइम चलिरहेको बत्तीहरू थप्नको लागि यसले कारलाई शीतल र थप चम्किला बनाउन सक्छ, तर नेतृत्वमा दिनको बत्तीको सबैभन्दा बढी प्रभाव सौंदर्यशास्त्रमा होईन, तर मान्यता प्राप्त सवारीहरू प्रदान गर्नमा हो। विदेशमा गाडी हाँक्दा हेडलाइटहरू खोल्दा सवारी सवारी दुर्घटनालाई १२..4% ले घटाउन सक्छ र साथै कार दुर्घटनामा मृत्युको सम्भावना २ 26..4% ले कम हुन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, दिउँसो चालु बत्तीहरूको उद्देश्य ट्राफिक सुरक्षाको लागि हो।